FAQs - Sichuan Shuer Medical Devices Co, Ltd.
Biko kpọtụrụ anyị maka nkọwaozi
Ọnụ ahịa kacha nta dabere na iwu gị dị iche iche na mbukota.
Ọnụ ego mbupu na-adabere n'ụzọ ị na-ahọrọ iji nweta ngwongwo.Express na-abụkarị ụzọ kachasị ọsọ mana ọ dịkwa oke ọnụ.Site n'oké osimiri, ibu bụ ihe ngwọta kachasị mma maka nnukwu ego.Kpọmkwem ọnụego ibu anyị nwere ike inye gị naanị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa nke ego, ibu na ụzọ.
Anyị nwere ike ịnye ọrụ nrụpụta OEM?
Anyị nwere ike ịnye ọrụ nlele emebere tupu mmalite nke mmepụta oke.Anyị na-enyekwa ndị ahịa anyị ọrụ omenala na OEM.
Kedu asambodo anyị nwere?
Anyị nwere ọtụtụ akụkọ nyocha ngwaahịa ngwaahịa ndị ọzọ na asambodo, gụnyere SGS, CE, NIOSH, na STOS asambodo ule;site na ISO9001: 2016 ọkọlọtọ asambodo, na 3 mepụtara patent.
Ị nwere ike ịgagharị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe?
N'ezie, anyị na-anabata ndị ahịa ileta anyị factory n'oge ọ bụla, nghọta iji anyị ogologo oge imekọ ihe ọnụ
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị - AMP Mobile Igwe iku ume FFP2, Ihe mkpuchi China, Ihe mkpuchi PPE, Ihe mkpuchi ịwa ahụ nke ụlọ ahịa ọgwụ, Ihe mkpuchi ihu, Ihe mkpuchi mkpuchi China,